Udumele ochithwe esethathiwe esikoleni ngenxa yeminyaka - Ilanga News
Home Izindaba Udumele ochithwe esethathiwe esikoleni ngenxa yeminyaka
Udumele ochithwe esethathiwe esikoleni ngenxa yeminyaka
Uthi umoshe imali ethenga umfaniswano nethikithi njengoba esechayiswa
UNKZ Thulisile Dlamini ojike ephoxekile eGome High School, emuva kokwamukelwa njengomfundi, wathenga inyufomu kodwa kwathi esebuyela esikoleni ngakusasa, wachayiswa.
UYABILA yintukuthelo ehambisana nendumalo owesifazane waseSikhaleni (eSikhawini), eMpangeni osethe ukukhula ngokweminyaka othi uchayiswe yisikole saKwesaMkhwathethwa ebesesimthathile eyokwenza uGrade 10, esethenge nomfaniswano wanikwa nezincwadi (stationery).
UNkz Thulisile Dlamini (34) uthi uyoyixoxela amagwababa echobana into ayigilwe eGome High School, njengoba ebesethenge nethikithi lenyanga ethi uyoqala esikoleni.
Uthi mhla ka-25 kuNhlolanja (February), wahamba wayofuna isikhala kulesi sikole, wathathwa waze wanikwa izincwadi okuthe ngakusasa sekumele ayongena ekilasini, wajikiswa nguthishanhloko ethi ngeke besakwazi ukumthatha ngenxa yokuthi i-system yezemfundo iyamkhafula (ngenxa yeminyaka).
Ukhale ngokuthi okwenze wafuna ukubuyela edeskini, wukuthi ubengawazi umthetho wokuthi akafuneki umuntu omdala esikoleni, uhlale ezwa kuthiwa imfundo kayikhulelwa.
“Ngilwa nokuthi kungani bengithengise umfaniswano ngize ngimoshe imali yami ekubeni bona bewazi kahle kamhlophe umthetho kahulumeni ukuthi uthini? Othisha bayawazi umthetho, bangixhaphazile, badlala ngesikhathi sami sengizitshelile ukuthi ngivuka ngiyazithatha,” kusho uNkz Dlamini.
Uthi esikoleni waphuma ngo-2004 egula, kwathi ngokuhamba kwesikhathi, wabona ukuthi makabuyele ngoba impilo ifuna umatikuletsheni.
Uthi lesi sikole besimthembise ukuthi sizombuyisela kwaGrade-10 ngoba wayephume imfundo ingakashintshi.
“Yiphutha nje leli abalenzile ukuthi bazame into abaziyo ukuthi kayizameki. Mina-ke sengilahlekelwe yimali singekho isidingo ngenxa yephutha labo,” kusho uNkz Dlamini.
Uthi ngesikhathi efika okokuqala eyofuna isikhala sokufunda eGome High, wayengekho uthishanhloko, wathenjiswa ngabanye othisha.
“Uma kungangeneki kwikhompyutha bebezongitshela ngosuku lokuqala, bangichithe. Kungani uma sekumele ngiyoqala ekilasini, sebethi iminyaka yami iphikwe yikhompyutha?” kusho uNkz Dlamini.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal, uMnu Kwazi Mthethwa, uthe zikhona izikole zabantu abadala.
“Umnyango unezinhlelo zokunikeza abantu abadala ithuba lemfundo, ngokweminyaka yakhe akusamele afunde nezingane ezincane. Empeleni umfundi kumele aphume esikoleni uma esefike eminyakeni ewu-18 ubudala kodwa uma efike kuyona esengaphakathi esikoleni, i-system kayimkhafuli, kodwa kayivumi ukwamukela ongenayo,” kusho uMnu Mthethwa.
Previous articleAbakamasikandi ‘bayolila eNdlunkulu’
Next articleKuphelile ukuqagela ngezinguquko zoKhozi